Ururka Xaldoon oo Baaq ka soo saaray Xasuuqii Muqdisho – War La Helaa Talo La Helaa
By Hussein abdulle	 Last updated Dec 23, 2017
Ururka Xaldoon, Isaga oo gudanaya waajibaadka ka saaran Xal u helidda Dhibaatooyinka ragaadiyay Ummadda Soomaaliyeed, mar walbaana diyaar u ah inuu Ummadda la wadaago xaalad kastaa oo ay ku sugan tahay. Ayuu waxuu ummadda la wadaagayaa Inuu ka tacsiyeeyo Musiibadii qaran ee ka dhacday Xamar gaar ahaan Isgoyska Zobe, waxaanu leenahay intii ku dhimatay Rabbi ha u naxariisto Eheladii, asaxaabtii , qaraabadii iyo dhammaan Ummadda Soomaaliyeedna ha ka sabar siiyo, intii dhaawacantayna waxaa Alla casa wa jalla uga baryeynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo wixii gaarayna dembi dhaaf uga dhigo. Innaa lillaahi wa innaa ileyhi raajicuun.
Ururka Xaldoon, waxuu aad uga xun yahay, dhacdooyinkaan Bulshada ku soo noqnoqday, waxuuna si weyn u cambaareyhaa ciddii ka dambeysay xasuuqaa ba’an ee Ummad aan wax galabsan lagu gumaaday, Waxuuna leeyahay caddaaladdu waa imaaneysaa Caajilan am Aajilan, Dembiga aad gasheenna ciqaabtiisa waad heleysaan, Dhiigga Ummaddu bilaash maahan.
Ururka Xaldoon, Waxuu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaayaa ineey u midoobaan Cadawga aan naxariista laheyn ee maalin walbaa dhiigooda daadinayo, Haddii la helo midowgeenna iyo inaan cadawyada aan leenahay meel uga soo wada jeesano cadawgeenu ma helayo meel uu naga soo galo, Sidaa daraadeed, Waa in aan ku noqonnaa barnaamijkii deriseynta iyo iskaashaga Amniga.
Waxaana Ummadda xusuusineynaa in waddamada amniga ka jiraahi aaney aheyn waxa amniga sugaayo ciidamada oo keliya oo ay Bulshadu door muhiima ku leedahay doorkeeduna loo baahan yahay ineey ka soo baxdo.
Ururka Xaldoon, Waxuu dhawr jeer oo horena soo jeediyay haddana u soo jeedinaa Hay’adaha amniga iyo Xukuummaddu ineey la yimaadaan barnaamij cad oo amniga lagu sugaayo, dhacdooyinka dhacana ay ummadda ugu soo bandhigaan si shafaafiyad leh.
Ururka Xaldoon, waxuu u arkaa hawsha 1aad ee laga sugaayo Xukuumadda iyo Laamaha amniga inuu yahay sugidda amniga si taasi u suuragashana waxa lagama maarmaan ah in loo helo Miisaaniyad ku fila narrinka amniga wax kastaa ka hor.
Ururka Xaldoon, Waxuu soo jeedinaa una arkaa in aan dhacdooyinkaan loo qaadan uun hal dhinac in ay ka mas’uul yihiin ee meelo badan indhaha lagu qabto.
Ururka Xaldoon, Waxuu arkaa in Siraacyo dibadda ah in loo soo rarayo gudaha, taasna waxaa loo baahan yahay in feejignaanteeda la yeesho, meelo badanna wax laga fiiriyo.
Xukuumadda iyo laamaheeda ammaanka, waxaa laga sugaa in si dhaqsi ah ay ummadda ula wadaagaan waxa dhacay iyo sida ay wax u dhaceen, Golaha Shacabka isaguna waxaad mooddaa inuu ka gaabinayo la socodka iyo la xisaabtanka Xukuummadda ee dhacdooyinka dhibaatada wato ee bulshada ku soo noqnoqdo, oo dhacdo walbaa marka ay dhacdo aan dib loo raacin, waxaana leenahay waa mas’uuliyadda aad u dhaarateen ee xilalkiina guta.
Ururka Xaldoon, Waxuu mar labaad Shacabka Soomaaliyeed u soo jeedinaa meel walba ay joogaan ineey dareenkooda feejignaanta leh muujiyaan.
Ururka Xaldoon, waa urur mar walbaa u taagan danaha Bulshada Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Ururka Xaldoon